ဝတ္ထုတို၊ ၀တ္ထုရှည်၊ မှတ်တမ်း၊ လျှို့ဝှက်သည်းဖို၊ စုန်းတစ္ဆေ၊ ကျန်းမာရေး၊ ဗဟုသုတ၊ စွယ်စုံကျမ်းများ၊ ကွန်ပျူတာဆိုင်ရာ၊ ဖုန်း
စာပေရေချမ်းစင်တဲ့ အဲ့သည်နာမယ်လေးကိုသဘောကျပါတယ်။ သူတို့လုပ်နေတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုလည်းသဘောကျပါတယ်။ ရေရှည်တည်တံ့နေစေချင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စိတ်ထဲမှာတော့ ရေရှည်လုပ်ဖို့နည်းနည်းခက်မယ်လို့ထင်မိပါသေးတယ်။ ဒီလိုနဲ့ပဲ ရေချမ်းစင်ကလေးတွေရဲ့သတင်းတွေက လုပ်ပြီးသိပ်မကြာတဲ့အချိန်မှာပဲ ဘာမှမကြားရတော့သလောက် ဖြစ်လာပါတယ်။ ကျွန်တော်ပဲမသိတာလား လူတွေကပဲရိုးသွားလို့သတင်းမတင်ကြတော့တာလား မသိပါဘူး။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေ ကျွန်တော်လည်းကိုယ်တတ်နိုင်သလောက် လုပ်တဲ့အနေနဲ့ ဒီစာအုပ်စင်ကလေးကိုလုပ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီနည်းကရေရှည်တည်တံ့ဖို့လွယ်ကူတယ်လေ။ ရေချမ်းစင်လိုပါပဲ ဘယ်သူတွေလာသောက်သောက် ခွင့်ပြုထားပြီးသားပါ။ တင်ထားပေးတဲ့စာအုပ်တွေရဲ့အများစုက ကျွန်တော်ကြိုက်လို့ရှာဖွေထားတဲ့စာအုပ်တွေပါ။ တချို့ကတော့လုံးဝမကြိုက်ပါဘူး၊ တချို့ကကွန်ပျူတာနဲ့ဆိုင်တဲ့စာအုပ်တွေပါ။ တချို့က တော့ပေါ့ပေါ့ပါးပါး အပျင်းပြေဖတ်စရာတွေပါ။ ဒါပေမယ့် လာဖတ်တဲ့သူတွေ ကြိုက်ချင်ကြိုက်မှာပဲလို့ ယူဆပြီး စာအုပ်အစုံတင်ထားပါတယ်။ ကိုယ့်အကြိုက်ပေါ်မူတည်ပြီး နှစ်သက်တာရွေးဖတ်နိုင်မှာပါ။
အလကားရတဲ့ site နဲ့ အလကားရတဲ့ Space တွေမှာတင်ပေးထားတဲ့စာအုပ်တွေဖြစ်တော့ သူတို့ကပိတ်မပစ်သမျှကာလပတ်လုံးတော့ သူငယ်ချင်းတို့ဖတ်လို့ရမှာပါ။ ပထမလုပ်တဲ့ http://www.shwemanlaythar.wordpress.com က စာအုပ်တင်ဖို့အဆင်မပြေတော့ပါဘူး။ ဒါကြောင့် BlogSpot ကို ပြောင်းတင်တာပါ နောက်ပြီး BlogSpot မှာက Post တင်ရတာပိုမြန်ပါတယ် ဒီကဆက်ပြီး နောက်ကိုလည်း BlogSpot မှာပဲတင်သွားတော့မှာပါ။
စာအုပ်အများစုကို Browser မှာပဲဖတ်လို့ရနိုင်ပေမယ့် အချို့စာအုပ်တွေကတော့ Download လုပ်ပြီးမှဖတ်လို့ရပါမယ်။ File Size အရမ်းကြီးတဲ့စာအုပ်တွေနဲ့ PDF ဖန် တီးတဲ့ Software မတူညီတဲ့စာအုပ်တချို့မှာ Browser နဲ့ဖတ်လို့မရတဲ့ပြဿနာရှိပါတယ်။ ဒါလေးတွေကိုတော့ သည်းခံပေးကြပါ....
Credit to these sites......
မှတ်မိသလောက်ပြန်ရေးထားတာပါ၊ ကျွန်တော်စာအုပ်ယူထားပြီး credit list ထဲမှာမပါခဲ့ရင်ခွင့်လွှတ်ကြပါ.....
လောလောဆယ်တော့ “မြန်မာစာအုပ်များ”ဆိုတဲ့ facebook အကောင့်ကနေစာအုပ်အသစ်တွေယူထားပါတယ်။
ဇော်ဂျီ၊ ၀င်းအင်းဝ Download ရယူရန်
မသိင်္ဂီ(1)
ရွှေမန္တလေးသား. Awesome Inc. theme. Theme images by molotovcoketail. Powered by Blogger.